ခင်မင်မှု သံမှိုများ or Nails of Friendship in Burmese | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« I do not agree with Xenophobic BIRD’S BRAIN letter from the Star
Do not rub salt into the wound withaqualified apology »
ခင်မင်မှု သံမှိုများ or Nails of Friendship in Burmese
Source_E mail Fwd to me from Dr.Thein Win: Nails of Friendship by lettwebaw ခင်မင်မှုသံမှိုများ
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အင်မတန်ကို စိတ်တို စိတ်ဆတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့အဖေက ကောင်လေးကို အိမ်ရိုက်သံတစ်ထုပ် ပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတော့တယ်။
Tags: Online Communities, Social Networking
This entry was posted on October 14, 2010 at 1:34 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.